Tentmaking and a Scribe’s Pen in Bible Times | So Wunim?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Kyerɛwdua ne adubiri bɛn na na wɔde kyerɛw ade wɔ Bible mmere mu?
Demmire kyerɛwdua a efi Egypt, bɛyɛ mfe 2,000 ni
Ɔsomafo Yohane nkrataa abiɛsa a ɔkyerɛw a ɛwɔ Bible mu no, ɔkaa asɛm bi wɔ nea etwa to no mu de n’asɛm no baa awiei sɛ: “Mewɔ nsɛm pii a anka mɛkyerɛw wo, nanso mempɛ sɛ metoa so de adubiri ne kyerɛwdua kyerɛw wo.” Mfiase Hela nsɛmfua a Yohane de dii dwuma no, nea ɛkyerɛ ankasa ne sɛ, ɔmpɛ sɛ ɔde “[adubiri] tuntum ne demmire” bɛkyerɛw.—3 Yohane 13, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures.
Demmire na na akyerɛwfo de yɛ kyerɛwdua. Wosen ano ma ɛsen fã na wɔpae ano no kakra. Sɛ ano no bu a, na ɔkyerɛwfo no betumi de ɔbo bi asen ano no bio. Ná wotumi de demmire a wɔasen ano saa no kyerɛw ade te sɛ nea wɔde pɛn kyerɛw ade nnɛ no.
Adubiri no pii wɔ hɔ a, ɛyɛ pupuawisiw anaa kanea mu tuntum a wɔde ade tentann bi afra. Ná wɔyɛ no muhumuhu tɔn, na akyiri yi wɔde nsu afra sɛnea ɛsɛ ansa na wɔde ayɛ adwuma. Sɛ wɔde saa adubiri no kyerɛw mmɛw krataa anaa aboa nhoma so a, ɛwo wɔ krataa no so, nanso krataa no ntumi nnonom adubiri no. Enti sɛ ɔkyerɛwfo no kyerɛw biribi na otĩ a, obetumi de sapɔw abɔ nsu mu de apopa; eyi kyerɛ sɛ na sapɔw ka nneɛma a ɔkyerɛwfo de yɛ adwuma no ho. Saa nneɛma yi a yɛahu afa tete adubiri ho yi ma yehu nea na ɛwɔ Bible akyerɛwfo no adwenem bere a wɔkae sɛ wobetwa ebinom din mu anaa wɔbɛpopa afi Onyankopɔn nkae nhoma mu no.—Exodus 32:32, 33; Adiyisɛm 3:5.
Ntamadan bɛn na na ɔsomafo Paulo nwene?
Nneɛma a na wɔde pam ade bɛyɛ mfe 2,000 ni
Asomafo Nnwuma 18:3 ka sɛ na ɔsomafo Paulo nwene ntamadan. Tete no, na ntamadan nwemfo de yoma anaa abirekyi nhwi nwene ntama asinasin. Afei na wɔpompam ntama asinasin no bom de yɛ ntamadan ma akwantufo. Nanso Paulo bere so de na wɔde mmoa nhoma na ɛyɛ ntamadan. Ebi nso wɔ hɔ a, na wɔde tapɔlin na ɛnwene; Paulo kurom Tarso na na wɔyɛ tapɔlin no. Ebetumi aba sɛ Paulo de saa nneɛma yi mu bi anaa ne nyinaa mpo yɛɛ adwuma. Bere a Paulo ne Akwila yɛɛ adwuma no, ebetumi aba sɛ ɔde tapɔlin yɛɛ biribi a na nkurɔfo taa de kata wɔn fie anim sɛnea owia ntɔ hɔ.
Ɛbɛyɛ sɛ Paulo suaa saa adwuma yi wɔ ne mmofraberem. Nneɛma bi a wɔakohu wɔ Egyptfo abakɔsɛm mu di adanse sɛ bere a na Romafo di tumi no, sɛ mmofra di bɛyɛ mfe 13 a, na wofi ase sua nsaanodwuma. Sɛ Paulo fii ase suaa adwuma bere a na wadi mfe 13 a, ɛnde ebetumi aba sɛ odii mfe 15 anaa 16 no, na wahu adwuma no ani so paa, enti na obetumi atwitwa ntama akeka asi anim de paane ne fitii apam. Nhoma bi ka sɛ: “Ebetumi aba sɛ bere a Paulo wiee adwumasua no, wɔde nnwinnade a ɔde bɛyɛ adwuma maa no.” (The Social Context of Paul’s Ministry) Nhoma no toa sɛ: “Esiane sɛ sekan ne fitii ara na na wɔde nwene ntamadan nti, ebetumi aba sɛ na ntamadan nwemfo no tumi yɛ adwuma wɔ baabiara.” Enti na Paulo betumi ayɛ adwuma wɔ baabiara de ahwɛ ne ho wɔ asɛmpatrɛw adwuma no mu.
So Wunim?—November 2012